ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ ဆောပိုလိုရှိလူနာများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများ (၂၀၁၈) - Your Brain On Porn
Revista ဘရာဇီးလ်က de Psiquiatria
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်ဗားရှင်း ISSN 1516-4446အွန်လိုင်းဗားရှင်း ISSN 1809-452X
ဗြ Bras ။ Psiquiatr ။ , ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ် Epub ဇွန်လ 07, 2018 ၏
မာရီယာ LS Amaral1
ဂျက်ဖရီတီ Parsons345
1Ambulatórioက de Impulso လိင်လိင် Excessivo အီးPrevençãoက de Desfechos Negativos Associados Ao Comportamento (AISEP), Instituto က de Psiquiatria (IPq), ဆေးရုံ Das Clínicas, Faculdade က de Medicina, Universidad de Sao Paulo (USP), ဆောပိုလို, SP, ဘရာဇီး
2Departamento က de Psiquiatria, Faculdade က de Medicina, USP, ဆောပိုလို, SP, ဘရာဇီး
3အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီပညာရေးဆိုင်ရာလေ့လာမှုနှင့်သင်တန်းစင်တာ (CHEST)၊ နယူးယောက်၊
4စိတ်ပညာဌာန, Hunter ကောလိပ်နယူးယောက်၏စီးတီးတက္ကသိုလ် (CUNY), နယူးယောက်, NY, အမေရိကန်နိုင်ငံ
5ကနျြးမာရေးစိတ်ပညာနှင့်လက်တွေ့သိပ္ပံပါရဂူအစီအစဉ်, အဆိုပါဘွဲ့လွန်စင်တာ, CUNY, နယူးယောက်, NY, အမေရိကန်နိုင်ငံ
အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (ESB) အတွက်ကုသမှုရှာသောသူအပေါငျးတို့သလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့၏ယောက်ျားအတွက်အနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်ပြည်နယ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူအပေါ်လေ့လာမှုများတစ်မရှိခြင်းရှိပါသည်။ ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive (SC), စိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါ, လူနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုကုသမှု-ရှာကြံနမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူဆန်းစစ်ဖို့ရည်ရွယ်။
ကျနော်တို့ 88 (37 [42%] လိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ် [51%] လိင်ကွဲရိုးရိုးနှင့် 58) ESB ပြင်ပလူနာနှင့် 64 ထိန်းချုပ်မှုစာရင်းသွင်း။ အကဲဖြတ်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေး (SCS), အ Beck တော့ပူပန် Inventory (Bai), အ Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory (BDI) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေပါဝင်သည်။
ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ESB ပြင်ပလူနာဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ပြီးသောတိုးချဲ့ SC, စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာ, ပြသခဲ့သည်။ ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်နှင့်စပ်လျဉ်း ESB ပြင်ပလူနာပိုပြီးလိင်ဆက်ဆံခြင်း, မိတ်ဖက်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်ကပိုစအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့်အကာအကွယ်မဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူတို့တစ်တွေပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြသော်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့် SC, တစ်ဦးအဓိကမိတ်ဖက်တွေနဲ့ကာကွယ်ထားအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ စီးပွားပျက်ကပ်ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မဲ့လိင်အင်္ဂါလိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ Condomless စအိုလိင်ဆက်ဆံ SC တို့ကခန့်မှန်းခဲ့သည်ကိုလည်းလိင်ကွဲ ESB ပြင်ပလူနာ (36%) ကအစီရင်ခံခဲ့သည်။
အဆိုပါဒေတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရှာဖွေနေကြသူအားလုံးလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့၏ယောက်ျားအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်လယ်ကူညီသည်။ ဤအ psychopathological အချက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတို့တွင်ဆက်သွယ်မှုအများပြည်သူကျန်းမာရေးအတွက်သက်ရောက်မှု, Clinician နှင့်သုတေသနရှိသည်။
Key ကိုစကားလုံးမြား: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive; အကျိုးသက်ရောက်စေ; စိုးရိမ်စိတ်; စိတ်ကျရောဂါ; HIV ပိုး; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ
hypersexual ရောဂါများအတွက်အဆိုပြုအဖြေရှာတဲ့စံ, အ DSM-2013 အတွက်မပါဝင်ကြသောအခါ 5, ကတည်းက1 လေ့လာမှုတစ်ခုတိုးပွားလာပိုကောင်း ESB ၏ရှင်းလင်းမော်ဒယ်များပတျဝနျးကငျြအငြင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စများကိုကျော်လွှားဖို့ကြိုးပမ်းမှုအတွက်အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (ESB) အတွက်ကုသမှုရှာသောသူတစ်ဦးချင်းစီအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်ပါပွီ။ လေ့လာရေး ESB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အဓိကအပြောင်းအလဲတချို့ Impulse ကြောင်းကိုညွှန်ပြ,2,3 သော ICD-10 အတွက်အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကို၏အဖြေရှာတဲ့စံထောက်ခံပါတယ်။2,4 တခြားလေ့လာမှုအဓိက psychopathological ပြောင်းလဲမှုများ obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD) ယန္တရားအလားတူစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဟာမလှူ, ဖွံ့ဖြိုးဆဲပါဝင်သည်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြ,5,6 သော compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါအဖြစ် ICD-11 အတွက်ကြောင့်လက်ရှိအဆိုပြုထားအဖြေရှာတဲ့စံနှာ။7 ဒေတာတချို့ ESB စွဲဖို့အလားတူ functioning ၏စိတ်ကူးကိုထောကျပံ့,8 အရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲများအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံမျက်နှာသာ, နှစ်ဦးစလုံး Impulse နှင့် compulsive လွှမ်းမိုးမှုပါဝငျသညျ။9 အသစ် hypersexual ရောဂါသတ်မှတ်ချက်ဦးနှောက် monoamine ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်း receptors ၏ပွောငျးလဲများ၏အပြန်အလှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ hyperactivation အတွက်ရလဒ်သောတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီး conceptualized ခဲ့ကြသည်,10 အသစ်လေ့လာမှုများကထောက်ခံသည်။11 ခြားနားချက်များနေသော်လည်းတိကျတဲ့အချိန်ဘောင်အတွင်းအားလုံးအလွန်အကျွံနှင့်ထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးအတင်ဆက်ထားပါတယ်တဘက်, တိုကျတှနျးထား, ထို ESB မှတ်စု၏သီအိုရီများ, နှင့်အပြုအမူသည်ဤလူတစ်ဦးချင်းစီကြောင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေမှဒုက္ခဆင်းရဲအစီရင်ခံခြင်းနှင့်အသက်တာ၏အဓိကဒေသများရှိအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များကြုံနေရ, ထိုကဲ့သို့သောနေကြတယ် အလုပ်, ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးအဖြစ်။
ယင်း၏ Impulse နှင့်အရှုံး-of ထိန်းချုပ်မှုရှုထောင့်ကြောင့်,12 ESB အထူးသဖြင့်လိင်တူများနှင့်ရိုးရိုးလူတို့တွင်, United States မှာလူဦးရေအမျိုးမျိုးအတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။13,14 အထူးသညျဤလေ့လာမှုများ, လူသားတစ်ဦး immunodeficiency virus ကို (HIV ပိုး) ၏ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ပွားမှုနှင့်အခြားလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု (အက်စ်တီအိုင်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive (SC) နှင့်ထိုကဲ့သို့သောမျိုးစုံပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ condomless စအိုလိင်ဆက်ဆံအဖြစ်မြောက်မြားစွာအနုတ်လက္ခဏာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များအကြားဆက်သွယ်မှုများကိုဖော်ထုတ်ကြပါပြီ,15,16 နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ condomless စအိုလိင်ဆက်ဆံထုတ်ရှာကြံ။17 သို့သော်ဤလေ့လာမှုများတစ်ဦးချင်းစီအစားကုသမှု-ရှာကြံနမူနာ၏ကျယ်ပြန့်လူဦးရေအတွက် SC လက္ခဏာတွေအကဲဖြတ်ပါပြီ။
ESB နှင့်အတူအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ပါဝင်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲအလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုအာရုံစိုက်နေသည်။ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုပြီးပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ compulsive လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ESB အစီရင်ခံစာပြဿနာများနှင့်အတူရှိသူများ၏ထက်ဝက်ထက်18 နှင့်လိင်တူချစ်သူနှင့် SC နှင့်အတူရိုးရိုးယောက်ျားတစ်ဦးလေ့လာမှုအတွက် 92% ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်သူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုထဲကခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။19 ဖှလူကြီးများနှင့်အတူမျိုးစုံပေါ့ပေါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူကို ESB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီက HIV အပါအဝင်အက်စ်တီအိုင်၏ဂီယာ, ဖြစ်သည့် ESB, နှင့်ဆက်စပ်အရှိဆုံးပြင်းထန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါနှင့်သေဆုံးနှုန်းအဘို့အမြင့်ဆုံးစွန့်စားမှုကို run ။17,20,21 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သုတေသန ESB တစ်အသုံးအများဆုံးအတိုင်းအတာအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များ, အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေး (SCS), ပိုပြီးပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်း သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်ကိုပြသ (ဥပမာအနိမ့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းနှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံတိုးမြှင့) ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်အက်စ်တီအိုင်၏ဝယ်ယူ။3,22 ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒေတာဖြောင့်ယောက်ျားအတွက် ESB နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများအကြားဆက်သွယ်မှုအပေါ်ရှားပါးသည်။13,23 ငယ် extant ဒေတာ ESB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏ကုသမှု-ရှာကြံနမူနာပါဝင်ပတ်သက်မရှိသေးပေနှင့်အလွန်ကန့်သတ်ဖော်ပြချက်တင်ပြခဲ့ပါသည်။
အနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်ပြည်နယ်များအထူးသဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါစိတ်ခံစားမှု, ESB နှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ။24 ထိုကဲ့သို့သောမျိုးစုံပေါ့ပေါ့လိင်မိတ်ဖက်များနှင့်တိုးမြှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူတွေ့ဆုံအဖြစ်အပြုအမူတွေကဤအနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်ပြည်နယ်များခံစားနေရပြီးအမျိုးသားတွေအတွက်သတင်းပို့ခဲ့ကြသည်။25 ထိုသို့သောအနုတ်လက္ခဏာပြည်နယ်စိတ်ခံစားမှု ESB များအတွက်အစပျိုးခြင်းအဖြစ်အစေခံရန်စဉ်းစားနေကြ26 နှင့် HIV နှင့်အက်စ်တီအိုင်စာချုပ်ချုပ်၏အန္တရာယ်ကိုတိုးမြှင့် condomless လိင်ပိုဖြစ်စဉ်များ, လွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်။ သို့သော်အခြားသုတေသီများစိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါကြုံနေရသည့်အခါတစ်ဦးချင်းစီအစီရင်ခံစာတစ်ခုသာလူနည်းစု (15-25%) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတိုးလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။27
ဒေတာတချို့စိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါဖြစ်စေ, အမျက်ဒေါသကြုံနေရအနုတ်လက္ခဏာနည်းလမ်းအောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက် impact စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။28 ပြောင်းပြန်အခြားလေ့လာမှုများအနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်ပြည်နယ်များကြုံနေရတချို့လူတွေကဆုံးဖြတ်ချက်များအန္တရာယ်ကိုရှောင်လွှဲနိုင်ရန်လုပ်စေခြင်းငှါတွေ့ပြီ။29 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်စပ်လျဉ်းအဲဒီဒေတာစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြုံနေရတစ်ဦးချင်းစီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အကြံပြုလိမ့်မယ်။ သို့သော် Mustanski28 စိုးရိမ်စိတ်အတွက်တိုးတချို့လိင်တူချစ်သူအတွက်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ arousal အစိတ်အပိုင်းများကိုအန္တရာယ်များအပြုအမူ potentiate အံ့သောငှါစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ခံစားချက်များကိုချိတ်ဆက်စေခြင်းငှါတွေးဆ။
ESB အပေါ်လေ့လာမှုများတစ်ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကောက်ယူထားပြီးနေစဉ်, ဘရာဇီး ESB နှင့်ကမ္ဘာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းကိုပင်ကိုယ်မူလ data တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူယဉ်ကျေးမှုမူကွဲနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကသိကျွမ်းရာအစဉ်အဆက်အလျှော့အလွန်ကန့်သတ်ကြသည်။ ကုသမှု-ရှာကြံနမူနာများတွင် HIV ပိုးအန္တရာယ်အပြုအမူအပေါ် ESB ၏သက်ရောက်မှုနှင့်အပျက်သဘောခံစားချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာမှုများတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ရှားပါးမှုရှိပါသည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက် ESB, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆောပိုလို, ဘရာဇီး၏ပြည်နယ်၏မြို့တော်အတွက် ESB ပြင်ပလူနာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြားတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူဆနျးစစျဖို့ပဲ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်သက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ ESB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာတစ်ခုတိုးလာပြင်းထန်မှုကိုတင်ပြခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုထက်ပိုမိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေကိုသတင်းပို့မယ်လို့တွေးဆ။ ငါတို့သည်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်, စိတ်ကျရောဂါနှင့် ESB ၏ပြင်းထန်မှုအပြုသဘောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူနှင့်ဆက်နွယ်လိမ့်မယ်လို့တွေးဆ။
ဤစာတမ်းသည်Ambulatórioက de Impulso လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Excessivo မှာကောက်ယူမယ့်လေ့လာမှုကePrevençãoက de Desfechos Negativos Associados Ao လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Comportamento (AISEP), Instituto က de Psiquiatria (IPq), ဆေးရုံ Das Clínicas, Faculdade က de Medicina, Universidad de Sao Paulo (USP) မှဒေတာများတင်ဆက် ။ သင်တန်းသားများကိုထိုကဲ့သို့သောရေဒီယို, မဂ္ဂဇင်းများနှင့်ဂျာနယ်များအဖြစ်အများအပြားမီဒီယာမှတဆင့်အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကြော်ငြာများနှင့်အနီးအနားရှိအသိုင်းအဝိုင်းမှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ စုဆောင်းမှု၏ပထမဦးဆုံးလှိုင်း ESB လက္ခဏာတွေနှင့်အတူသင်တန်းသားများကိုပစ်မှတ်ထားနှင့်သူတို့အနေနဲ့အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏ညည်းညူဆိုလိုတာက, ICD-10 စံနှုန်း F52.7 အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကိုရှိခြင်းအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်လျှင် ESB များအတွက်ကုသမှုရှာသောသူတို့သည်လေ့လာမှုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီခဲ့ကြ မကြာခဏ ESB မှဦးဆောင်ပြုလုပ် drive ကို,4 အောက်ပါသုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအားဖြင့်အတူတူပင် 12 လကာလ၌ထင်ရှားလက်တွေ့ချို့ယွင်းသို့မဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲမှဦးဆောင်နေတဲ့ maladaptive ESB လည်းမရှိဆိုလိုတာက Goodman ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အပေါ်အခြေခံတဲ့လိင်စွဲ: သည်းခံစိတ် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြင့်တက်); ဆုတ်ခွာ (ထိုကဲ့သို့သော abstinence ကြုံနေရအဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ,); မကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ; မအောင်မြင်ထိန်းချုပ်မှု; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်အချိန်ဖြုန်း; လျှော့ချလူမှုရေးသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်လှုပ်ရှားမှုများ; နှင့်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များနေသော်လည်းအဆက်မပြတ်သွား။9 စုဆောင်းမှု၏ဒုတိယလှိုင်း ESB လက္ခဏာတွေမပါဘဲသင်တန်းသားများကိုပစ်မှတ်ထား။ သူတို့က ICD-10 စံနှုန်း F52.7 ပေါ်တွင်သို့မဟုတ် Goodman ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးလိင်စွဲလမ်းများအတွက်အခြေစိုက်အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကိုများအတွက်သတ်မှတ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်မပြုခဲ့ပါလျှင်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရှာသောသူတစ်ဦးချင်းစီရထိုက်ခွင့်ရှိကြ၏။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်တန်းသားများကိုစာတတ်မြောက်, 18 အသက်အရွယ်နှစ်သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေဖြစ်ခဲ့သူ, နောက်ဆုံး 10 နှစ်ပေါင်းဘရာဇီးတှငျနထေိုငျခဲ့ကြရတယ်။ paraphilias (ICD-10 F65), ကျား, မဝိသေသလက္ခဏာရောဂါ (ICD-10 F64), schizophrenia, schizotypal နှင့်လှညျ့မမှန် (ICD-10 F20-F29), လက်ရှိ Manic: လေ့လာမှုအဘို့ဖယ်စံအောက်ပါပုံမမှန်မဆိုတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုပါဝင်သည် သို့မဟုတ် hypomanic ဇာတ်လမ်းတွဲ (F ကို 30.0, F31.0, နှင့် F 31.1, F ကို 31.2), နှင့်ဦးနှောက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ (ICD-10 F0.6) ကြောင့်ကအခြားစိတ်ရောဂါ။
204 တစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်းပထမဦးဆုံးလှိုင်းစဉ်အတွင်းလေ့လာမှုကြော်ငြာများမှတုန့်ပြန်နှင့် 130 အဆိုပါစိစစ်အင်တာဗျူးအဘို့ရောက်လာတယ်။ ဤအရာ, 114 ယောက်ျားနဲ့ 10 အမျိုးသမီးတွေအရည်အချင်းပြည့်မီစဉ်းစားခဲ့ကြနှင့်လေ့လာမှုမှာစာရင်းသွင်းခဲ့ပေမယ့် 26 ယောက်ျားတစ်ဦးကွဲပြားခြားနား comorbid ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ဆေးကုသမှုရှာဖွေနေအခြားမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့အပါအဝင်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုး, များအတွက်အကဲဖြတ်မှုများအားလုံးဖြည့်စွက်ဘူး, ဒါမှမဟုတ် အခက်အခဲကတော့ Self-တုံ့ပြန်မှုအတိုင်းအတာကိုနားလည်။ ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် 121 အဆိုပါပြအင်တာဗျူးအဘို့အလာ 78 တစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ရှာ၏။ သို့သော်ဤငါးအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကိုနှင့်လိင်စွဲလမ်းများအတွက်စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနမူနာကနေဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ ကျန်ရှိနေသေးသော 73 ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ, 64 ယောက်ျားကိုးအမျိုးသမီးများ, ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီစဉ်းစားခဲ့ကြနှင့်လေ့လာမှုမှာစာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ ဤစာတမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလိမ့်မည်တော်မူသောအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကိုနှင့်လိင်စွဲလမ်းများအတွက်သတ်မှတ်ချက်ဖြည့်ဆည်းမပေးခဲ့ပါဘူးသူကျွန်တော် ESB ပြင်ပလူနာမခေါ်ပါလိမ့်မယ်အဘယ်သူကိုအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကိုနှင့်လိင်စွဲလမ်းများအတွက်စံ, မပြည့်စုံသောသူ 88 ယောက်ျားနှင့် 64 ယောက်ျားကနေဒေတာတွေကိုသတင်းပို့ ထိန်းချုပ်မှုကိုခေါ်ပါ။ လေ့လာမှုအကဲဖြတ်အားလုံးသည်အောက်တိုဘာလ 2010 ကနေနိုဝင်ဘာလ 2011 မှပြီးမြောက်ခဲ့သည်။
အားလုံးသင်တန်းသားများကိုအသိပေးသဘောတူညီခကျြပေးနှင့်စံချိန်စံညွှန်းမီ Self-တုံ့ပြန်မှုအတိုင်းအတာနှင့်စိတ်ရောဂါအကဲဖြတ်ပါဝင်သည်တစ်ဦးတည်းအချိန်2နာရီအကဲဖြတ်ပြီးစီးခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုစက္ကူနှင့်ခဲတံဗားရှင်းကိုအသုံးပြုပြီးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အတိုင်းအတာပြီးစီးခဲ့သည်။ သုတေသနလက်ထောက်ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာအစီအမံခြုံငုံသုံးသပ်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် sociodemographic ဒေတာအလိုက်သိမ်းယူကြ၏။ တစ်ဦးကစိတ်ရောဂါအရည်အချင်းပြည့်မီစံစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့လက်တွေ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအကူအညီအထောက်အပံ့များကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကုသမှု ESB ရှိသူများကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ဆေးရုံ Das Clínicas, Faculdade က de Medicina, USP ၏ကျင့်ဝတ်ကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
သင်တန်းသားများကို၎င်းတို့၏အသက်, လိင်, ဥပဒေရေးရာအိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ, လူမျိုး, ပညာရေး၏အနှစ်, အလုပ်အကိုင်, မိသားစုကိုလစဉ်ဝင်ငွေ, လိင်, နှင့် HIV serological status ကိုသတင်းပို့ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (ESB) အတိုင်းအတာ
အဆိုပါ SCS လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမြင်မှုနှင့်အ compulsive ထပ်တလဲလဲ၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းအကဲဖြတ်ဖို့တီထွင်ခဲ့သည်။30 အဆိုပါစကေး 10 ထုတ်ပြန်ချက်များပါဝင်ပါသည် (ဥပမာ, "ကျနော့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးနှင့်အပြုအမူကိုငါ့အသက်တာ၌ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေလျက်ရှိသည်။ ") 1 မှ = အလွန်ငါကဲ့သို့သော4ထံမှ = မအပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုကဲ့သို့သောလေးအမှတ်စကေးပေါ်တွင် rated ရှိကြ၏။ ဒါဟာ ESB တစ်အသုံးများအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘရာဇီးဗားရှင်းကောင်းသောယုံကြည်စိတ်ချရ (0.95 ၏ Cronbach ရဲ့ alpha) ရှိသည်ဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။31
အဆိုပါ Beck တော့ပူပန် Inventory (Bai) ၏ပေါ်တူဂီဗားရှင်းဘရာဇီးအတွက်အသုံးပြုရန်အတည်ပြုခဲ့သည်32 နှင့် (Cronbach ရဲ့ alpha = 0.76) ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်တွေ့ရှိထားသည်။ = လုံးဝမဟုတ် 21,0= အနည်းငယ်, 1 = အတန်အသင့်နှင့်2= ပြင်းပြင်းထန်ထန်: ဒီအောက်ပါလေးအမှတ်တုံ့ပြန်မှုစကေးနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်မှုလက္ခဏာတွေ၏ပြင်းထန်မှုကိုတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ 3-item ကို Self-အစီရင်ခံစကေးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory (BDI) ၏ပေါ်တူဂီဗားရှင်းဘရာဇီး (Cronbach ရဲ့ alpha = 0.81) တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အတည်ပြုခဲ့သည်33 ဤသည်ထိုကဲ့သို့သော, ပျော့အလယ်အလတ်နှင့်ပြင်းထန်သောအဖြစ်, စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ၏ပြင်းထန်မှုကိုတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ 21-item ကို Self-အစီရင်ခံစကေးဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအန္တရာယ်အကဲဖြတ်ယခင်သုတေသနအပေါ်အခြေခံဤစာတမ်း၏ပထမဦးဆုံးစာရေးဆရာကတီထွင်ခဲ့သည်34,35 လစဉ်စအိုနဲ့အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှု၏ကြိမ်နှုန်း, ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုနှင့်ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်အရေအတွက်အပါအဝင်အဓိကနှင့်ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းရန်။ ကြိုတင်ခြောက်လအတွင်းဒီမေးခွန်းလွှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန် Self-အစီရင်ခံစာမေးခွန်းလွှာ semantic နဲ့ content ပြဿနာများကိုစစ်ဆေးရန် 20 တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူမောင်းနှင်သောနှင့် 83.35% တစ် Cronbach ရဲ့ alpha ခဲ့ရတယ်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအန္တရာယ်အကဲဖြတ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ဒါဟာအစအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်လိင်မြားတှငျပါဝငျခွငျးအကွောငျးကိုဖြည့်စွတ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း p <10 တစ်အရေးပါမှုအဆင့်နှင့်အတူ STATA ဗားရှင်း 0.05 သုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားအမျိုးအစား variable တွေကိုနှင့်နည်းလမ်းများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ် variable တွေကိုများအတွက်စံသွေဖီများအတွက်အချိုးအစားအဖြစ်ပေးအပ်သည်။ အုပ်စုနှိုင်းယှဉ်မှုများသည် chi-square စမ်းသပ်မှုများသို့မဟုတ်အလေးသာမှုအချိုးများနှင့်အမျိုးအစား variable များအတွက် 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလ (95% CI) ကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ tစဉ်ဆက်မပြတ် variable တွေကိုအဘို့အ -tests ။
ESB ပြင်ပလူနာထိန်းချုပ်မှုထက်စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာနှင့်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများတိုးမြှင့်ပြင်းထန်မှုသတင်းပို့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ပါဝင်သူဝိသေသလက္ခဏာများ, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့် SC ရမှတ်များနှင့် ESB ပြင်ပလူနာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ၏ပြင်းထန်မှုကြောင့်ဒုတိယယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့နှင့် SC အပြုသဘောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း, ငါတို့အပျက်သဘောခံစားချက်ပြည်နယ်များ (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, စိတ်ကျရောဂါ၏ဆွေမျိုးပံ့ပိုးမှုများကိုဆန်းစစ်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦး bivariate စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေပြီးတော့ Logistic ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များ ) နှင့် SC လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူပေါ်အမည်ရ: တစ်အဓိကမိတ်ဖက်နှင့်အတူ 1) condomless စအိုလိင်ဆက်ဆံ; 2) အဓိကမိတ်ဖက်နှင့်အတူ condomless အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှု; 3) ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ condomless စအိုလိင်ဆက်ဆံ; နှင့် 4) ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှု condomless ။ လူအားလုံးတို့သည်မော်ဒယ်များအသက်, လူမျိုး, ဥပဒေရေးရာအိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ, လိင်နှင့် serological status ကိုများအတွက်ချိန်ညှိခဲ့ကြသည်။
ပါဝင်သူဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်တင်ပြကြသည် စားပွဲတင် 1။ ESB ပြင်ပလူနာသိသိသာသာထိန်းချုပ်မှု (t ထက်အသက်ကြီးခဲ့ကြသည်(150) = 2.53; p = 0.006) ။ အဆိုပါ ESB ပြင်ပလူနာများ၏အသက် 21 နှင့် 66 နှစ်အကြားအဟောင်းကိုအရွယ်ရှိနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအသက်အရွယ်ဟောင်း 18 နှင့် 59 နှစ်အကြားမရသေးသည်လည်းရှိသည်။ ထိန်းချုပ်မှုထက်ပိုမို ESB ပြင်ပလူနာ (χကော့ကေးဆပ်ခဲ့ကြ2(2) = 8.20; p = 0.01) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာနှင့်စပ်လျဉ်းပို ESB ပြင်ပလူနာχ (ထိန်းချုပ်မှုထက်လိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ်ရိုးရိုးဖြစ်ခြင်းအစီရင်ခံတင်ပြ2(1) = 12.10; p = 0.001) နှင့်ပိုပြီး ESB ပြင်ပလူနာအလုပ်ခံခဲ့ရသည် (χ2(2) = 16.66; p <0.001) ။ ESB ပြင်ပလူနာများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားအိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေကွာခြားမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ESB ပြင်ပလူနာများမှာလက်ထပ်ရန်ပိုများသည်။2(2) = 4.64; p <0.09) ။
ဇယား ၁ ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ ဆောပိုလိုတွင် ESB ပြင်ပလူနာ ၈၈ ဦး နှင့်အထီးထိန်းချုပ်မှု ၆၄ ခုတို့၏ Sociodemographic အချက်အလက်များ
ESB ပြင်ပလူနာ (ဎ = 88)
controls (ဎ = 64)
စုစုပေါင်း (ဎ = 152)
ကော့ကေးဆပ် 70 (79.5) 38 (59.4) 108 (71.1)
အာဖရိကသားစဉ်မြေးဆက် 16 (18.2) 25 (39.1) 41 (27.0)
အခြား2(2.3) 1 (1.6)3(2.0) 8.20*
အိမ်ထောင်သည် 38 (43.2) 17 (26.6) 55 (36.2)
တခုတည်းသော 42 (47.7) 41 (64.1) 83 (54.6)
ကွာရှင်း9(9.1)6(9.4) 15 (9.87) 4.64†
ဂေးနဲ့ရိုးရိုး 37 (42.1) 10 (15.0) 47 (30.9)
လိင်ကွဲ 51 (58.0) 54 (84.4) 105 (69.1) 12.10‡
အလုပ်လက်မဲ့သော 14 (15.9) 1 (1.6) 15 (9.9)
အလုပ် 69 (78.4) 48 (75.0) 117 (77.0)
ကြောငျးသား5(5.7) 15 (23.4) 20 (13.2) 16.66‡
Serological status ကိုအစီရင်ခံတင်ပြ
အမည်မသိ 15 (17.0) 13 (20.3) 28 (18.4)
အနုတ် 64 (72.7) 48 (75.0) 112 (73.7)
အပြုသဘောဆောင်သော9(10.2)3(4.7) 12 (7.9) 0.43
အသက်အရွယ်, (SD) ကိုဆိုလိုတာ 38.17 (8.91) 33.98 (11.41) 36.40 (10.21) 2.53*
ပညာရေး၏အနှစ်ကိုဆိုလိုတာမှု (SD) 14.20 (4.18) 13.47 (4.02) 13.89 (4.12) 1.09
လစဉ်ဝင်ငွေ (R $), ပျမ်းမျှ (95% CI)§ 3,000 (2,500-3,942) 3,000 (2,700-4,000) 3,000 (3,000-3,800) 0.90
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, ယုတ်မှု (SD) 31.93 (5.02) 15.44 (5.44) 24.99 (9.67) 19.30‡
စိုးရိမ်စိတ်, ယုတ်မှု (SD) 13.43 (9.98) 6.48 (8.42) 10.51 (9.94) 4.52‡
စီးပွားပျက်ကပ်, ယုတ်မှု (SD) 16.51 (8.60) 6.21 (5.66) 12.18 (9.06) 8.88‡
မဟုတ်ရင်သတ်မှတ်ထားသောမဟုတ်လျှင်ဒေတာ, ဎအဖြစ် (%) ပေးအပ်သည်။
95% CI = 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလ; ESB = အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ; SD က = စံသွေဖည်။
‡p <0.001 ။
§မန်း Whitney U စမ်းသပ်။
ESB ပြင်ပလူနာပိုမိုမြင့်မား SC (t ခဲ့(150) = 19.30; p <0.001), စိုးရိမ်စိတ် (t ကို။ )(150) = 4.51; p <0.001) နှင့်စိတ်ကျရောဂါရမှတ်များ (t(149) = 8.88; ထိန်းချုပ်မှုထက် p <0.001) ။ ကျနော်တို့ SC နှင့်စိတ်ကျရောဂါအကြားသိသာသောဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ (ESB ပြင်ပလူနာ: r = 0.38; p <0.001; ထိန်းချုပ်မှု: r = 0.25; p = 0.04), SC နှင့်စိုးရိမ်စိတ် (ESB ပြင်ပလူနာ: r = 0.27; p = 0.01; ထိန်းချုပ်မှု: r = 0.33; p = 0.007) နှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်စိတ် (ESB ပြင်ပလူနာ: r ကို = 0.66; p <0.001; ထိန်းချုပ်မှု: r ကို = 0.70; p <0.001) ။
ကြိုတင်ခြောက်လအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက် ESB ပြင်ပလူနာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားနှိုင်းယှဉ်အတွက်တင်ပြကြသည် စားပွဲတင် 2။ ESB ပြင်ပလူနာထိန်းချုပ်မှုထက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်လိင်မြားတှငျပါဝငျခွငျး၏မြင့်မားသောအလေးသာခဲ့ရသည်။ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုကိုအဓိကမိတ်ဖက်, အဓိကမိတ်ဖက်ပိုမိုအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုများနှင့်အဓိကမိတ်ဖက်တွေနဲ့ပိုပြီးအကာအကွယ်မဲ့လိင်အင်္ဂါလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်အတူပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကဖော်ပြခဲ့သည်။ ESB ပြင်ပလူနာပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်များနှင့်ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်ကိုပိုမိုလိင်ဆက်ဆံသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ESB ပြင်ပလူနာပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်သူတို့နှင့်အတူအကာအကွယ်မဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့်အတူအများကြီးပိုစအိုလိင်ဆက်ဆံသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ 28 (18%) ဖြောင့်အဖြစ် Self-ဖော်ထုတ်နေစဉ် (ဎ = 64), 10 (36%) Self-ဖော်ထုတ်လိင်တူချစ်သူအဖြစ်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ condomless စအိုလိင်ဆက်ဆံအစီရင်ခံသောသူတို့၏အမျိုးအ။ စားပွဲတင်3လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်သည်နှင့်အညီ ESB ပြင်ပလူနာများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများဖြန့်ဖြူးပြသထားတယ်။ အဓိကမိတ်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနှင့်စပ်လျဉ်းလိင်ကွဲအဖြစ် Self-ဖော်ထုတ်တဲ့သူတွေကိုပိုပြီးလိင်ဆက်ဆံခြင်း, အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုများနှင့်အကာအကွယ်မဲ့အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ ရိုးရိုးလိင်တူချစ်သူအဖြစ် Self-ဖော်ထုတ်သို့မဟုတ်တဲ့သူတွေကိုပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားယုတ်အရေအတွက်ကိုတင်ပြပြီးပိုစအိုလိင်ဆက်ဆံအစီရင်ခံနေစဉ်ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနှင့်စပ်လျဉ်းလိင်ကွဲအဖြစ် Self-ဖော်ထုတ်တဲ့သူတွေကိုပိုမိုအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုများနှင့်အကာအကွယ်မဲ့အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။
ဇယား ၂ ESB ပြင်ပလူနာ ၈၈ ဦး နှင့်ထိန်းချုပ်မှု ၆၄ ခု၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၊ ဆန်ပိုလို၊ ဘရာဇီး
ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လအတွက်လိင်ဆက်ဆံခြင်း 74 (84.1) 50 (78.1) 1.48 0.65-3.37 0.350
ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လအတွက်အဓိကမိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံ 39 (44.3) 43 (67.2) 0.39 0.20-0.76 0.006
အဓိကမိတ်ဖက်နှင့်အတူအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှု 32 (36.4) 39 (60.9) 0.37 0.19-0.71 0.003
အဓိကမိတ်ဖက်နှင့်အတူအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်အတွင်းကွန်ဒုံးများ၏ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအသုံးပြုမှု 26 (29.6) 29 (45.3) 0.51 0.26-0.99 0.047
အဓိကမိတ်ဖက်တွေနဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံ 21 (23.9) 17 (26.6) 0.87 0.41-1.82 0.710
အဓိကမိတ်ဖက်တွေနဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းကွန်ဒုံးများ၏ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအသုံးပြုမှု 14 (15.9) 10 (15.6) 1.02 0.42-2.47 0.960
ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လအတွက်ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင် 62 (70.5) 22 (34.4) 4.55 2.28-9.07 <0.001
ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လအတွက်ပေါ့ပေါ့လိင်လက်တွဲဖော်အရေအတွက်, ယုတ်မှု (SD) 12.63 (27.98) 0.86 (1.76) t ကို (150) = -3.36 0.001
2 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို 52 (59.1) 10 (15.6) 8.4 3.64-19.36 <0.001
ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှု 35 (39.8) 18 (28.1) 1.69 0.84-3.37 0.140
ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်အတွင်းကွန်ဒုံးများ၏ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအသုံးပြုမှု 23 (26.1) 12 (18.8) 0.62 0.70-3.37 0.290
ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံ 46 (52.3) 17 (26.6) 3.03 1.51-6.07 0.020
ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းကွန်ဒုံးများ၏ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအသုံးပြုမှု 28 (31.8)9(14.1) 2.85 1.24-6.58 0.010
အဘယ်သူမျှမ 55 (63.2) 38 (59.4) 1
တခါတလေ 29 (32.9) 25 (39.1) 0.76 0.39-1.50 0.440
ခဏခဏ4(4.6) 1 (1.6) 1.14 0.58-2.21 0.700
အဘယ်သူမျှမ 74 (84.1) 63 (98.4) 1
တခါတလေ 11 (12.8) 1 (1.6) 9.00 1.07-75.27 0.010
ခဏခဏ3(3.5)0-
95% CI = 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလ; ESB = အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ; OR = လေးသာမှုအချိုးအစား။
ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအခါသမယ၏ 0-75% အတွက်ကွန်ဒုံးသုံးပြီးဆိုလိုသည်။
ဇယား ၃။ လိင်တူမေထုန် ၃၇ နှင့်လိင်ကွဲလိင်တူဆက်ဆံသူ ၅၁ တို့၏လိင်အပြုအမူ၊ ဆောပိုလို၊ ဘရာဇီး
ရိုးရိုး / ဂေး
ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လအတွက်လိင်ဆက်ဆံခြင်း 31 (83.8) 43 (84.3) 0.950
ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လအတွက်အဓိကမိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံ 8 (21.6) 31 (60.8) <0.001
အဓိကမိတ်ဖက်နှင့်အတူအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှု2(5.4) 30 (58.8) <0.001
အဓိကမိတ်ဖက်နှင့်အတူအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်အတွင်းခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကို 1 (2.7) 25 (49) <0.001
အဓိကမိတ်ဖက်တွေနဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံ 8 (21.6) 13 (25.5) 0.670
အဓိကမိတ်ဖက်တွေနဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကို6(16.2) 8 (15.7) 0.950
ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လအတွက်ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင် 31 (83.8) 31 (60.8) 0.020
ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လအတွက်ပေါ့ပေါ့လိင်လက်တွဲဖော်အရေအတွက်, ယုတ်မှု (SD) 23.8 (39.5) 4.5 (8.9) 0.006
ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှု6(16.2) 29 (56.9) <0.001
ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်အတွင်းခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကို4(10.8) 19 (37.6) 0.007
ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံ 29 (78.4) 17 (33.3) <0.001
ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကို 18 (48.7) 10 (19.6) 0.004
ESB အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ = ။
ပုံ 1 psychopathological variable တွေကိုနှင့်အဓိကနှင့်ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်ပေးပုံစံကိုပြသသည်။ အဓိကမိတ်ဖက်နှင့်အတူကွန်ဒုံးများ၏ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့သူများသည်ကွန်ဒုံးများ၏မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုသတင်းပို့များထက်နိမ့် psychopathological ရမှတ်များပေးအပ်သည်။ ပြောင်းပြန်ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူကွန်ဒုံးများ၏ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့သောသူတို့ကိုကွန်ဒုံးများ၏မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုသတင်းပို့များထက်ပိုမိုမြင့်မား psychopathological ရမှတ်များပေးအပ်သည်။
ပုံ ၁ လိင်ဆက်ဆံမှုလွန်ကဲခြင်း (ESB) အတွင်းလူနာများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားအဓိကနှင့်ကျပန်းမိတ်ဖက်များနှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း (n = 1) A: အဓိကမိတ်ဖက်နှင့်လိင်အင်္ဂါလိင်ဆက်ဆံရာတွင်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း။ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုကိုမကြာခဏအစီရင်ခံသောစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုကိုတင်ပြသူများ (ဆိုလိုသည်မှာ [M] = 152; standard deviation [SD] = 9.3 vs. 7.5; SD = 13.8)) (t)[134.5] = 3.2; p = 0.001) နှင့်စိုးရိမ်စိတ်ရမှတ် (M = 8.0; M က = 9.3 vs. SD က = 11.9; SD က = 10.0) (t ကို = 2.4; p = 0.02); B က: အဓိကမိတ်ဖက်တွေနဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံအတွက်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း, ကို C: ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း။ t ကို (ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့သူများသည်တိုးမြှင့်စိတ်ကျရောဂါရမှတ် (SD က = 14.8;; 9.0 vs. SD က = 11.4 M က = 9.0) ပေးအပ် = -2.0; p = 0.05); : D: ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံအတွက်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း။ ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့သူများသည်တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive (SC) ပေးအပ် (M = 29.8; 9.8 vs. SD က = 23.5; SD က = 9.5) (t ကို = -3.6; p <0.001), စိတ်ကျရောဂါ (M = 17.6; SD က = 8.9 vs. M = 10.4; SD က = 8.4) (t ကို = -4.4; p <0.001) နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရမှတ်များ (M = 15.4; SD က = 10.6 vs. M = 8.9; SD ကို = 9.2) (t ကို) = -3.6; p <0.001) ။ စာရင်းအင်းအရသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကို SC တွင် A၊ B၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြissueနာများ (သို့) C. တွင်စိုးရိမ်ခြင်းနှင့် SC တို့တွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ အကြိမ်ပေါင်း ၇၆ မှ ၁၀၀% အထိရှိသည်။ မကြာခဏမဟုတ်ဆိုလိုသည်အခါသမယ၏ 76-100% ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများ၏ Logistic ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များအတွက်တင်ပြကြသည် စားပွဲတင် 4။ SC အသက်, လူမျိုး, ဥပဒေရေးရာအိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ, လိင်နှင့် serological status ကိုအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့အကာအကွယ်မဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံတစ်ခုလွတ်လပ်သောခန့်မှန်းဖြစ်ပြခဲ့သည်။ SC အတွက်တစ်ဦးချင်းစီတဦးတည်း-အမှတ်တိုး 7% အားဖြင့်ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ condomless စအိုလိင်ဆက်ဆံ၏အလေးသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။
ဇယား ၄ အလွန်အကျွံလိင်ဆက်ဆံခြင်း (ESB) ပြင်ပလူနာများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုတွင်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုကိုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကျဆင်းစေသည့်ပုံစံများ (n = 4), ဆောပိုလို၊ ဘရာဇီး
OR အညွှန်း 1.00 အညွှန်း 1.04 အညွှန်း 0.98 အညွှန်း 1.07†
OR အညွှန်း 0.95 အညွှန်း 0.90† အညွှန်း 1.03 အညွှန်း 1.05
OR အညွှန်း 1.00 အညွှန်း 1.03 အညွှန်း 1.00 အညွှန်း 1.02
95% CI = 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလ; OR = လေးသာမှုအချိုးအစား။
†p <0.05 ။
အားလုံးမော်ဒယ်များအသက်, လူမျိုး, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ, လိင်နှင့် serological status ကိုများအတွက်ချိန်ညှိခဲ့ကြသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာအဓိကမိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်နှင့် ပတ်သက်. , ထိန်းချုပ်မှုအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုခဲ့အရှိဆုံးအရာ၏အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှု၏မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း, သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ရေရှည်တည်ငြိမ်ဆက်ဆံရေးများ၏အခြေအနေတွင်ဘုံဖြစ်သောကွန်ဒုံးမပါဘဲ၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူထိန်းချုပ်မှုနမူနာပိုမိုဖြောင့်ယောက်ျား, ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအနေပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်နှင့် ပတ်သက်. ယင်း ESB ပြင်ပလူနာပိုပြီးပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်, ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံခြင်း၏မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း, စအိုလိင်ဆက်ဆံမြင့်မားကြိမ်နှုန်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုထက် condomless စအိုလိင်ဆက်ဆံမြင့်မားကြိမ်နှုန်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုပေါင်းစပ်မှုကြောင့်အက်စ်တီအိုင်နှင့် HIV ကူးစက်မှု၏အန္တရာယ်မှစိုးရိမ်ပူပန်နေသည်။ Meta-analysis သည် HIV ပိုးကူးစက်ခြင်းအတွက်စအိုလိင်ဆက်ဆံ၏အခန်းကဏ္ဍကိုပြန်လည်သုံးသပ်စအိုလိင်ဆက်ဆံပင်အလွန်အမင်းတက်ကြွ antiretroviral ကုထုံးစဉ်အတွင်း HIV ပိုးကူးစက်ဘို့အမြင့်မားသောအန္တရာယ်အလေ့အကျင့်ကြောင်းကိုကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။36 ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအနိမ့်မှုနှုန်းနှင့်အတူစအိုလိင်ဆက်ဆံစဉ်များတွင်ပါဝင်လိင်ကွဲတစ်ခုတိုးပွားလာအချိုးအစားတွေ့36 အရာပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ condomless စအိုလိင်ဆက်ဆံသတင်းပေးပို့သူကို ESB သင်တန်းသားများ၏ 36% ဖြောင့်လူဖြစ်ကြ၏ရသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာ, နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ESB ပြင်ပလူနာများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လိုက်တဲ့အခါ, ငါတို့သည်လည်းစအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့်အဓိကမိတ်ဖက်နှင့်အတူ condomless စအိုလိင်ဆက်ဆံစဉ်များတွင်ပါဝင်လိင်ကွဲယောက်ျားတစ်ဦးသည်သက်ဆိုင်ရာအချိုးအစားကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်။
ဒါဟာ 16 အဆိုပါ ESB ပြင်ပလူနာများ၏% နှင့်ထိန်းချုပ်မှုများ 22% သည်လွန်ခဲ့သောခြောက်လအတွင်းမိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမပြုခဲ့ကြောင်းထောက်ပြရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတပြင်လုံးကိုနမူနာအဘို့အကောင့်မပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု detect လုပ်ဖို့က၎င်း၏စာရင်းအင်းပါဝါအားလျော့ကြလိမ့်မည်။ ESB ပြင်ပလူနာ, အထူးသဖြင့်ဖြောင့်ယောက်ျားသည်ဤအပြုအမူကိုပိုပြီးအစီရင်ခံတင်ပြသော်လည်း, ဒီအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုများနှင့်ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ condomless အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှု၏ကြိမ်နှုန်း၏အသုံးအနှုန်းများအတွက်အုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်တို့တွင်အဘယ်သူမျှမကစာရင်းအင်းသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏ရတဲ့အကြောင်းရင်းကြောင်းဖွယ်ရှိသည် ထိန်းချုပ်မှုထက်။
psychopathological ပေါ်ထွန်းခြင်း၏တစ်ဦးကကွဲပြားခြားနားတဲ့ပုံစံအဓိကနှင့်ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကနေပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အလွန်ကြီးစွာသောစိုးရိမ်ပူပန်၏, ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်ရှိသူများသတင်းပို့ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုစအိုလိင်ဆက်ဆံစဉ်များတွင်ပါဝင်အထူးသဖြင့်အခါ, ပိုမိုမြင့်မား psychopathological ရမှတ်များပေးအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကိုထိခိုက် (စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်ပူပန်) ၏တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုသတင်းပို့ကြောင်းလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းများမှာ28,37 နှင့် SC17,30 HIV ပိုးအန္တရာယ်အပြုအမူပေါ်မှာ။ အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အချို့သောတစ်ဦးချင်းစီစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေသက်သာဖို့လိင်စိတ်နိုးထကိုသက်ဝင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်လိင်စိတ်နိုးထဝေစုအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်လွှဲပြောင်းသီအိုရီ, စဉ်းစား, အထူးသဖြင့်လာသောအခါအစိုးရိမ်ပူပန်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်ဆက်နွယ်စေခြင်းငှါ,38 အရှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေမှပိုပြီးကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်လာ။28 စီးပွားပျက်ကပ်လည်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ activation အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ25 သောမြင့်မား SC နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်သည့်အခါအလှည့်အတွက်အထူးသဖြင့်ထင်ရှား၏။39 ထို့အပွငျအများအပြားလေ့လာမှုများ ESB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများတိုးမြှင့် activation အစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ,40 အရာ SC နှင့်အတူမြင့်မားဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပိုမိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ activation တင်ဆက်ထားပါတယ်သူများသည်များသောအားဖြင့် HIV ပိုးကူးစက်ခြင်းနှင့်အတူပိုပြီးအန္တရာယ်များကိုယူပါ။26,28 ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ condomless စအိုလိင်ဆက်ဆံဟောကိန်းထုတ်ကတည်းကထိုကွောငျ့, SC, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပုံရသည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်နဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်အတွက်အန္တရာယ်အပြုအမူနဲ့အသင်းအဖွဲ့ကိုထိန်းသိမ်းရန်မပေးခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ SC ဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့် SC ပြင်းထန်မှုတိုးပွားလာဥပမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူအတွက်သွယ်ဝိုက်အခန်းကဏ္ဍ, play စေခြင်းငှါဤအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာယောက်ျား (MSM) နဲ့လိင်ရှိသည်သောယောက်ျားအပေါ်ယခင်လူဦးရေလေ့လာမှုများနှင့်အတူသဘောတူ17 နှင့် HIV အပေါ်လက်တွေ့လေ့လာမှုများနှင့်အတူ,21 ဘယ်မှာ SC အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ data တွေကိုအများပြည်သူကျန်းမာရေးအတွက်သက်ရောက်မှု, Clinician နှင့်သုတေသနရှိသည်။ ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ condomless စအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့် SC နှင့်၎င်းတို့၏အသင်းအဖွဲ့များအကြားဆက်စပ်မှု HIV ပိုးအန္တရာယ်အပြုအမူပိုကောင်းများ၏အပြန်အလှန်အနေဖြင့်တစ်ဦးအခွအေနေရလဒ်တွေကိုပိုပြီးလေ့လာဆည်းပူးခြင်းကြောင့်အန္တရာယ်အဓိပ်ပာယျ, တစ်ဦး syndemic စိတ်ကူးအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါအဆိုပြုမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများကိုထောကျပံ့ တစ်ဦးချင်းစီအချက်များ၏လွတ်လပ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုထက်အများအပြားအန္တရာယ်အချက်များ။22 ဤရွေ့ကား data တွေကိုသူတို့တစ်တွေစိတ်ရောဂါလက်တွေ့ setting ကိုအားလုံးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေကို၏ယောက်ျားနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးလှသည်။ ဒါဟာပြင်းထန်မှုတိုးပွါးနှင့်ကုသမှုကိုပိုမိုစိန်ခေါ်မှုစေသည်ကတည်းကထိုအ psychopathological အချက်များအကြားဆက်စပ်မှုကိုလည်းလက်တွေ့ရည်ရွယ်ချက်များကိုရည်မှတ်ဖြစ်ပါသည်,41 အထူးသဖြင့်ဤကဲ့သို့သောလူဦးရေပစ္စုပ္ပန်ကုသမှုလိုက်နာမှုပြဿနာများကြောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ "အထပ်ထပ်ဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ထဲမှာတိုကျတှနျးထားသပါဝငျနှင့် dysphoric စိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များမှတုန့်ပြန်အပြုအမူ (: ကတဦးတည်း hypersexual ရောဂါစံနှုန်းကိုထောက်ပံ့နေသောကြောင့်နောက်ဆုံးတွင် psychopathological ရောဂါလက္ခဏာတွေအကြားဆက်စပ်မှု (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့် SC), လယ်ပြင်၌သုတေသနကိုအထောက်အကူပြုရန် ဥပမာစိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ, ပျင်း, စိတ်တိုတာတွေ) ။ "အထူးသဖြင့်အဓိက psychopathological နှင့် pathophysiological ၏နားလည်မှုတိုးတက်စေရန် ESB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အ arousal ၏ယန္တရားအပေါ်အနာဂတ်သုတေသနများ၏ဆက်စပ်မှုဤစိတ်ဓါတ်များလက္ခဏာတွေအချက်များနှင့်ဆက်စပ်အဆိုပါတိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ activation အချက်များပါဝင်ပတ်သက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရာသူအချို့တစ်ဦးချင်းစီအတွက်စိစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်မပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ဤသို့ကျနော်တို့သူတို့အပျေါမှာဒေတာစုဆောင်းရန်မတတ်နိုင်ခဲ့ကြပြီးနောက်ရလဒ်တစ်ခုလက်တွေ့အဆင်ပြေနမူနာအပေါ်အခြေခံသည်။ အဆိုပါစိစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသူများသည်သူတို့စာတတ်မြောက်ခဲ့ကြပေးမပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားရှုထောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်အလက်များ၏ General တားဆီး။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အ ESB ပြင်ပလူနာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြားတွင်အနည်းငယ် sociodemographic ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အုပ်စုများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏ဖြန့်ဖြူးပိုမိုချိန်ခွင်လျှာခဲ့လျှင်လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားများသောအားဖြင့်ပိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသတင်းပို့ကတည်းကအထူးကပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။17 ထို့အပြင်ကျနော်တို့ဖွငျ့ဆိုးကျိုးများမှရှောင်ရှားရန်အသက်အရွယ်များအတွက်လိင်ကိစ္စအန္တရာယ်အပြုအမူ, လူမျိုး, ဥပဒေရေးရာအိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ, serological အခြေအနေ, နှင့်လိင်တိမ်းညွတ်ပေါ် Logistic ဆုတ်ယုတ်ချိန်ညှိ။ ဤလေ့လာမှု၏နောက်ထပ်န့်အသတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးကလေးဘဝဒုက္ခရှိခြင်းသည်မဟုတ်။ Hypersexual ပြင်ပလူနာရောဂါလက္ခဏာတွေ depressive နှင့်ဆက်စပ်သောသောကပိုငယ်စဉ်ကလေးဘဝဒုက္ခ, သတင်းပို့,42 နှစ်ခုစလုံးအချက်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာရဲ့အကောင်းဆုံး, ဒီလည်းလိင်ကွဲယောက်ျားပါဝငျသောစိတ်ရောဂါလက်တွေ့ setting ကိုအတွက် SC, အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ဓါတ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူအပေါ်ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤအ psychopathological ပြဿနာများကိုဖြေရှင်း HIV ပိုးကူးစက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကူညီနိုင်ကတည်းကကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ, ESB ကုသမှုရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီအတွက် SC, စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာအားစုံစမ်းစစ်ဆေး၏ဆက်စပ်မှုကိုအလေးပေး။
ဒီလေ့လာမှုက Estado de Sao Paulo (; 2010 / 15921-6 ပေးရန် FAPESP) မFundaçãoက de Amparo à Pesquisa ကထောက်ခံခဲ့သည်။
1 ။ American Psychiatric Association ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ, ပဉ္စမ Edition ကို (DSM-5) ။ Arlington: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး; 2013 ။ [ links များ ]
2 ။ Barth RJ, ကြင်နာတက် BN ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse ၏ mislabeling ။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 1987; 13: 15-23 ။ [ links များ ]
3 ။ Kalichman SC, Rompa ဃရှာကြံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive Scales: ယုံကြည်စိတ်ချရ, တရားဝင်မှုနှင့် HIV ပိုးအန္တရာယ်အပြုအမူခန့်မှန်း။ J ကို Pers အကဲဖြတ်။ 1995; 65: 586-601 ။ [ links များ ]
4 ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က။ လက်တွေ့ဖော်ပြချက်များနှင့်ရောဂါရှာဖွေလမ်းညွှန်ချက်များ [အငျတာနကျ]: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်မမှန်များ၏ ICD-10 ခွဲခြား။ [2018 ဇန်နဝါရီ 15 ကိုးကား] ။ www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf [ links များ ]
5 ။ Coleman အီး compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကနေသင့်ရဲ့စိတ်ရှည်ဆငျးရဲဒုက်ခလား? စိတ်ရောဂါအမ်း။ 1992; 22: 320-5 ။ [ links များ ]
6 ။ မိုင်းလုပ်သား MH, Raymond N ကို, Mueller BA, လွိုက် M က, Lim က KO ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထကြွလွယ်သောနှင့် neuroanatomical ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2009; 174: 146-51 ။ [ links များ ]
7 ။ et al je, Atmaca M က, Fineberg NA, Fontenelle LF, Matsunaga H ကို, Janardhan Reddy YC, ပေးသနား။ Impulse ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်ခြင်းနှင့် ICD-11 ထဲမှာ "အပြုအမူစှဲ" ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014; 13: 125-7 ။ [ links များ ]
8 ။ Kühn S က, Gallinat ဂျေဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု: porn အပေါ်ဦးနှောက်။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014; 71: 827-34 ။ [ links များ ]
9 ။ Goodman အေတစ်နာမ၌ကဘာလဲ? မောင်းနှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခု syndrome ရောဂါသတ်မှတ်ဘို့အဝေါဟာရရှင်းလင်းချက်။ လိင်စွဲ compulsive ။ 2001; 8: 191-213 ။ [ links များ ]
10 ။ Everitt B, ကြွက်များနှင့်လူက Bancroft ဂျေ: အထီးလိင်ဖို့နှိုင်းယှဉ်ချဉ်းကပ်။ Annu ဗြာလိင် Res ။ 1991; 2: 77-117 ။ [ links များ ]
11 ။ Jokinen J ကို, Boström AE, Chatzittofis တစ်ဦးက, Ciuculete DM, Öbergကီလိုဂရမ်, Flanagan ဖြစ်မှု, et al ။ hypersexual ရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် HPA ဝင်ရိုး related မျိုးဗီဇ၏ methylation ။ Psychoneuroendocrinology ။ 2017; 80: 67-73 ။ [ links များ ]
12 ။ ရိဒ် RC, Garo S ကို hypersexual အပြုအမူအကျိုးဆက်များစကေး၏ Fong သည် T. Psychometric ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2012; 1: 115-22 ။ [ links များ ]
13 ။ Dodge B, Reece M က, Cole ကို SL, Sandfort TG ။ လိင်ကွဲကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ။ J ကိုလိင် Res ။ 2004; 41: 343-50 ။ [ links များ ]
14 ။ McBride KR, Reece M က, Sanders လုပ် SA ။ ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ရလဒ်ခန့်မှန်းရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေးအသုံးပြုခြင်း။ လိင်စှဲလမျးသူ compulsive ။ လိင်စွဲ compulsive ။ 2008; 15: 97-115 ။ [ links များ ]
15 ။ Semple SJ, Strathdee လုပ် SA, Zians J ကို, ပက် TL ။ လိင်တူဆက်ဆံသူကို HIV ပိုးလူတို့တွင်ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာများအတွက်စိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲခြင်း၏အခြေအနေတွင်လိင်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်များ။ BMC ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2010; 10: 178 ။ [ links များ ]
16 ။ Semple SJ, Zians J ကို, Strathdee လုပ် SA, ပက် TL ။ လိင်တူဆက်ဆံသူကို HIV ပိုးလူတို့တွင်လိင်မာရသွန်နဲ့စိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲခြင်း။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2009; 38: 583-90 ။ [ links များ ]
17 ။ Grov ကို C, Parsons JT, Bimbi DS ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2010; 39: 940-9 ။ [ links များ ]
18 ။ Bancroft J ကို, Vukadinovic Z. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse, ဒါမှမဟုတ်ဘာလဲ? တစ်သီအိုရီမော်ဒယ်ဆီသို့။ J ကိုလိင် Res ။ 2004; 41: 225-34 ။ [ links များ ]
19 ။ Morgenstern J ကို, Muench က F, O'Leary တစ်ဦးက, Wainberg M က, Parsons JT, Holland, E, et al ။ လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားအတွက် non-paraphilic compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စိတ်ရောဂါပူးတွဲရောဂါ။ လိင်စွဲ compulsive ။ 2011; 18: 114-34 ။ [ links များ ]
20 ။ Dodge B, Reece M က, Herbenick: D, Fisher ကနေ C, Satinsky S က, Stupiansky N. ဆက်ဆံရေးလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်ရောဂါနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူကိုယောက်ျားတစ်ဦးလူထုအခြေပြုနမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အကြား။ လိင် Transm Infect ။ 2008; 84: 324-7 ။ [ links များ ]
21 ။ Kalichman SC ကာဣနဃတစ်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်ဆေးခန်းကနေန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်မြင့်မားသောအန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်၏ညွှန်းကိန်းများအကြားဆက်ဆံရေးဟာ။ J ကိုလိင် Res ။ 2004; 41: 235-41 ။ [ links များ ]
22 ။ Parsons JT, Rendina HJ, Moody RL, Ventuneac တစ်ဦးက, Grov C. Syndemic ထုတ်လုပ်မှုနှင့်မြင့်မားသောလိင်တက်ကြွလိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive / hypersexuality: တစ်သုံးအုပ်စုကိုစိတ်ကူးများအတွက်နောက်ထပ်သက်သေသာဓက။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2015; 44: 1903-13 ။ [ links များ ]
23 ။ Långström N ကို, Hanson RK ။ အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အမြင့်နှုန်းထားများ: ဆက်စပ်မှုနှင့်ခန့်မှန်း။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2006; 35: 37-52 ။ [ links များ ]
24 ။ ရိဒ် RC, လက်သမား BN, Spackman M က, ပါလိမ့်မယ် DL ။ Alexithymia, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများနှင့် hypersexual အပြုအမူများအတွက်အကူအညီရှာကြံလူနာအတွက်စိတ်ဖိစီးကျရောက်နေတဲ့မှအားနည်းချက်။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2008; 34: 133-49 ။ [ links များ ]
25 ။ Bancroft J ကို, Janssen E ကို, ခိုင်ခံ့: D, Carnes L ကို, Vukadinovic Z ကို, Long က JS ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်-ယူပြီးလိင်တူချင်းအမျိုးသားများတွင်: အလိင်စိတ်နိုးထ၏ဆက်စပ်မှု, ခံစားချက်နှင့်အာရုံခံစားမှုရှာ။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2003; 32: 555-72 ။ [ links များ ]
26 ။ Grov ကို C, Golub လုပ် SA, Mustanski B, Parsons JT ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, ပြည်နယ်အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားတစ်ဦးနေ့စဉ်ဒိုင်ယာရီလေ့လာမှုမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ။ Psychol စွဲပြုမူနေ။ 2010; 24: 487-97 ။ [ links များ ]
27 ။ Bancroft J ကို, Janssen E ကို, ခိုင်ခံ့: D, Carnes L ကို, Vukadinovic Z ကို, Long က JS ။ လိင်ကွဲယောက်ျားအတွက်ခံစားချက်နှင့်လိင်အကြားစပ်လျဉ်း။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2003; 32: 217-30 ။ [ links များ ]
28 ။ Mustanski ခပြည်နယ်နှင့်ရို၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု HIV ပိုးအန္တရာယ်အပြုအမူတွေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေ: MSM ၏နေ့စဉ်ဒိုင်ယာရီလေ့လာမှု။ ကနျြးမာရေး Psychol ။ 2007; 26: 618-26 ။ [ links များ ]
29 ။ Smoski MJ, Lynch TR, Rosenthal MZ စ, Cheavens JS, ချပ်မန်း AL, Krishnan RR ။ စိတ်ကျရောဂါလူကြီးများအကြားတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်။ J ကိုပြုမူနေ Ther Exp စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 39: 567-76 ။ [ links များ ]
30 ။ Kalichman SC, ဂျွန်ဆင် JR, Adair V ကို, Rompa: D, Multhauf K ကိုကယ်လီဂျေအေ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံရှာ: စကေးဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူတက်ကြွလူတို့တွင်ခန့်မှန်း AIDS ရောဂါအန္တရာယ်အပြုအမူ။ J ကို Pers အကဲဖြတ်။ 1994; 62: 385-97 ။ [ links များ ]
31 ။ et al Scanavino Mde T က, Ventuneac တစ်ဦးက, Rendina HJ, Abdo CH, Tavares H ကို, Amar ML ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေး compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစာရင်းနှင့် hypersexual ရောဂါစိစစ်စာရင်း:, ဘာသာပြန်ချက်, လိုက်လျောညီထွေနှင့်ဘရာဇီးအတွက်အသုံးပြုရန် validation ကို။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2016; 45: 207-17 ။ [ links များ ]
32 ။ Cunha ဂျေအေ။ em Das Escalas က de Beck ပေါ်တူဂီလက်စွဲစာအုပ် Das versões။ ဆောပိုလို: CASA Psicólogoပြုကြလော့ 2001 ။ [ links များ ]
33 ။ Gorenstein ကို C, အ Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory နှင့်ဘရာဇီးဘာသာရပ်များအတွက်ပြည်နယ်-စရိုက်များတော့ပူပန် Inventory တစ်ပေါ်တူဂီဗားရှင်း Andrade အယ်လ်အတည်ပြုခြင်း။ Braz J ကို Med Biol Res ။ 1996; 29: 453-7 ။ [ links များ ]
34 ။ Stein MD, Anderson က B, Charuvastra တစ်ဦးက, Friedmann PD ။ အရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောဆေးထိုးအပ်လဲလှယ်တက်ရောက်ရန်သူကိုမူးယစ်ဆေး injectors သောက်သုံးသူတို့တွင်တာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2001; 25: 1487-93 ။ [ links များ ]
35 ။ Muñoz-Laboy M က, Castellanos: D, Westacott R. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ, ဗိုင်းရပ်စ်ဝန်နှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူတက်ကြွလက်တင်လူတို့တွင် HIV ပိုးကူးစက်မှု၏သဘောထားအမြင်: တစ်ခုရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်လေ့လာမှု။ အေအိုင်ဒီအက်စ်စောင့်ရှောက်မှု။ 2005; 17: 33-45 ။ [ links များ ]
36 ။ Baggaley RF, White က RG, Boily MC ။ စအိုလိင်ဆက်ဆံမှတစ်ဆင့် HIV ပိုးကူးစက်အန္တရာယ်: စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု, Meta-analysis သည်နှင့် HIV ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အဂယက်ရိုက်။ int J ကို Epidemiol ။ 2010; 39: 1048-63 ။ [ links များ ]
37 ။ Bousman, CA, Cherner M က, Ake, C, Letendre S က, Atkinson JH, ပက် TL, et al ။ စိတ်ကြွဆေးနှင့် HIV များ၏အခြေအနေတွင်လိင်တူဆက်ဆံသူကို Non-monogamous လူတို့တွင် negative စိတ်ဓါတ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 2009; 119: 84-91 ။ [ links များ ]
38 ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်စိတ်လှုပ်ရှား၏ Zillmann ဃလွှဲပြောင်း။ ခုနှစ်တွင်: Cacioppo JT, အသေးသုံးငွေ RE, အယ်ဒီတာများ။ လူမှု psychophysiology: တစ် sourcebook ။ နယူးယောက်: Guilford; 1983 ။ စ။ 215-40 ။ [ links များ ]
39 ။ မိုင်းလုပ်သား MH, Coleman အီး compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရန်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးမျိုး။ လိင်စွဲ compulsive ။ 2013; 20: 127-38 ။ [ links များ ]
40 ။ seok JW, Sohn JH ။ ပြဿနာ hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အာရုံကြောအလွှာဟာ။ တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience ။ 2015; 9: 321 ။ [ links များ ]
41 ။ Nofzinger EA ၏, Thase ME, Reynolds က CF 3rd, ဖရန့် E ကို, Jennings JR, Garamoni GL, et al ။ စိတ်ဓာတ်အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို။ သိမြင်မှုအပြုအမူကုထုံးတွေနဲ့ကုသမှုမီနှင့်အပြီး Self-အစီရင်ခံစာအားဖြင့်အကဲဖြတ်, အမူအကျင့်များနှင့် nocturnal penile tumescence အစီအမံ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1993; 50: 24-30 ။ [ links များ ]
42 ။ Chatzittofis တစ်ဦးက, Arver S က, Öberg K ကို Hallberg J ကို, Nordstrom P ကို, hypersexual ရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် Jokinen ဂျေ HPA ဝင်ရိုး dysregulation ။ Psychoneuroendocrinology ။ 2016; 63: 247-53 ။ [ links များ ]
Received: သြဂုတ်လ 30, 2017; လက်ခံခဲ့သည်: ဒီဇင်ဘာလ 07, 2017